About Us - Shandong Macpex Machinery Equipment Co., Ltd.
Yakavambwa muna 2010. Inyanzvi yekugadzira kongiri michina michina.Mundima yekongiri yekusanganisa ine ruzivo rwakapfuma, timu yehunyanzvi, yakanakisa tekinoroji rutsigiro.Isu tinopa yakakwana chigadzirwa mhando yemapatya shaft kongiri musanganiswa, yepuraneti kongiri musanganiswa, yakamira batching chirimwa, mobile batching chirimwa uye yakaoma dhaka musanganiswa chirimwa uye nezvimwe.
Kukwanisa kugadzira: 500 mayuniti batching plant.Staff: 300 vashandi.Tinowana anopfuura makumi maviri patents uye zvitupa, nguva dzose funga nezvehunyanzvi hwekugadzira tekinoroji ibasa rechibhakera mukuvandudza fekitori.Injiniya wedu vese vakapedza dhigirii kana dhigirii repamusoro.Avhareji yezera imakore makumi matatu nemashanu, izvi zvinoita kuti kambani yedu igare yakazara nemakwikwi nevamwe.
Zvigadzirwa zvedu zvinofukidza HZS Concrete batching chirimwa, kubva pachiyero Hzs25, Hzs35, Hzs50, Hzs 60, Hzs75, Hzs 90, Hzs120, Hzs180, nezvimwewo.Kune ane compacted mhando, mudziyo mhando, yezvakatipoteredza mhando, hwaro yemahara uye mobile vhiri mhando, zvidyarwa zvedu zvakanyanya kushandiswa mudzimba nekunze kwemumunda wekugadzirira musanganiswa, precast uye magetsi chirimwa, kana kuvaka migwagwa.Vatengi vazhinji vanotipa rumbidzo huru nekuda kwemhando yedu yechigadzirwa pamwe nekushanda kuri nyore kwemidziyo yedu.Iyo skip hopper mhando uye bhandi conveyor mhando inogona kushandiswa zvinoenderana nemamiriro ako chaiwo.Dry musanganiswa chirimwa, simende musanganiswa, kongiri yekuisa boom, pombi yekongiri, nezvimwe.
Yedu Vision, Value, Mission
Kuve yakabatanidzwa uye inoshanda yekuvaka muchina mhinduro mupi, chengetedza nguva uye mutengo kune mutengi, ita mabhenefiti uye mavharuvhu.
Kubudirira kugadzirisa matambudziko, sevhisi yakanakisa, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro ndiko kuedza kwedu kusingagumi uye kutsvaga.
Kuchengeta tekinoroji yazvino, Macpex yakaratidza kuve yemhando yepamusoro, yakasimba uye yakavimbika, timu yedu ine ruzivo yakazvipira kuzere kugutsikana kwevatengi mune zvese zvikamu zvebhizinesi redu, kusanganisira kutenga, kugadzira, kutengesa uye mushure mekutengesa masevhisi.
Sanganisa kukosha ndiyo sirogani yedu.Isu tinobatsira mutengi kugadzira ramangwana rakabudirira nekushandira pamwe nemabhenefiti.